Showing 1 - 8 of 8 Results for author:"Yañʻ kyeʺ mhu vanʻ krīʺ ṭhana"
Mranʻ māʹ ruiʺ rā tū ri yā pacʻcññʻʺ myāʺ / Yañʻ kyeʺ mhu Vanʻ krīʺ Ṭhāna
ြမန်မာ့ရိုးရာ တူရိယာပစ္စည်းများ / ယဥ်ေကျးမှု ၀န်ြကီးဌာန
by Yañʻ kyeʺ mhu Vanʻ krīʺ Ṭhāna
Raṅʻ Kunʻ : Yañʻ kyeʺ mhu Vanʻ krīʺ Ṭhāna, 2003
ရန်ကုန် : ယဥ်ေကျးမှု ၀န်ြကီးဌာန, 2003
Khyaṅʿʺ ruiʺ rā dha leʹ nhaṅʿʹ phratʻ thuṃ̣ʺ : apuiṅʿʺ (1)
ချင်းရိုးရာဓလေ့နှင့်ဖြတ်ထုံး : အပိုင်း (၁)
by Burma. Yañʻ kyeʺ mhu Vanʻ krīʺ Ṭhāna
Raṅʻ Kunʻ : Yañʻ kyeʺ mhu Vanʻ krīʺ Ṭhāna, [19-?]
ရန်ကုန် : ယဥ်ေကျးမှု၀န်ြကီးဌာန, [19-?]
Book [text, cartography image] , Online - Google Books
1954-55 khu nhac ̒ ̕atvak ̒ mahāgīta sīkhaṅ ̒ " krī " myā" sīchui tī" mhut ̒ khraṅ ̒ " n* mūmhan ̒ caṃpra thā "...
၁၉၅၄-၅၅ ခုနှစ်တွက် မဟာဂီတ သီချင်းကြီးများ သီဆိုတီးမှုတ်ခြင်း၌ မူမှန်စံပြထားရှိရေး၊ အမှတ်သင်္ကေတပြုလုပ်ရေး အသံသွင်းထားရေးနှင့် ရုပ်ပေါ်သံထွက်ပြုလုပ်ရေးအဖွဲ့ ၏ အစီရင်ခံစာ / ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဋ္ဌာန
by Praññʻ thoṅʻ cu Mranʻ mā Nuiṅʻ ṅaṃ toʻ ʼA cuiʺ ra, Yañʻ kyeʺ mhu Vanʻ krīʺ Ṭhāna
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဋ္ဌာန
Ranʿkunʿ : ʾAoṅʻ Sai Paṃ Pṃu Nhipʻ Taiukʻ, 1956
ရန်ကုန် : အောင်သိပ္ပံပုံနိုပ်တိုက်, ၁၉၅၆
Mranʻ māʹ ʼanusukhuma ʼabhidhānʻ = Dictionary of Myanmar performing and plastic arts
Ranʻ kunʻ : Yañʻ kyeʺ mhu Vanʻ krīʺ Ṭhāna, 2001
Ranʻ kunʻ : Yañʻ kyeʺ mhu Vanʻ krīʺ Ṭhāna, 
Ministry of Culture in brief : year 2003-2004
Yangon : Ministry of Culture, [2003?]
Myanmar politics 1958-1962
Yangon, Burma : Universities Press, 2006-<2011>